अब पाँचखालको कम्तिमा १ हजार रोपनाीमा खुर्सानी खेती ! – मिलिजुली खबर
अब पाँचखालको कम्तिमा १ हजार रोपनाीमा खुर्सानी खेती !
in अर्थतन्त्र, कृषि, खेतबारी, गृहपृष्ठ, ट्रेडिङ, समाचार, समाज
८ बैशाख, धुलिखेलः तरकारी उत्पादनका हिसाबले बागमती प्रदेशकै उत्कृष्ठ ठाउँको रुपमा चिनिने काभ्रेको पाँचखालमा ब्यवसायीक खुर्सानी खेतीका विषयमा नगरपालिकाले छलफल अघि बढाएको छ । मेयर महेश खरेलले चिनियाँ टोलीसँग ब्यवसायीक खुर्सानी खेतीको विषयमा प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएको हो ।
नगरपालिकामै पुगेका चिनियाँ प्रतिनिधि टोलीका सदस्य चाङ, लि, चीन मामिलाका जानकार दिनेश खनाल, कृषि बयवसायी सिताराम मैनालीसँग मेयर खरेल ब्यवसायीक खुर्सानी खेतीका बारे छलफल गर्नुभएको हो । मेयर खरेलका अनुसार नगरपालिकाभित्रको १ हजार रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा खुर्सानी खेती गर्ने गरी चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँग छलफल भएको छ ।
१ हजारदेखि ३ हजार रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा खुर्सानी खेती गर्ने र प्रति रोपनी बार्षिक १ लाख हजार आम्दानी हुने मेयर खरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अबकाे एक साताभित्र चिनियाँ टोलीसँग खुर्सानी खेती परियोजनामा सम्झौता हुनेछ ।